မင်္ဂလာနိမိတ် – Susan's Wedding Guide (Myanmar) – Wedding Directory and Magazine of Myanmar
ဇူလိုငျ 28, 2019 နတှေ့ငျ
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အိမ်သစ်တက်ပွဲသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့လေ၏။
ထိုမိတ်ဆွေမှာ အိမ်သစ်တက်ပွဲကိုသာ ပြုလုပ်သော်ငြား ၄င်း၏ အိမ်မှာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ဖွယ်ရှိသည် အားလုံးကို အပြီး မသတ်ရသေးသောကြောင့် လက်သမားအချို့၊ ပန်းရန်ဆရာအချို့၊ ဆေးသုတ်သမားအချို့မှာလည်း အလုပ်ဝင်နေဆဲ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရလေ၏။
ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူတို့သည် ၄င်း၏ အိမ်ရှေ့ရှိ ခုံတန်းကလေးပေါ်တွင် ထိုင်ရင်းရောက်တတ်ရာရာ – စကားများကို ပြောဆိုနေခဲ့ကြလေ၏။ ထိုသို့ ပြောဆိုကြရင်း ကျွန်ုပ်၏ မျက်လုံးအစုံတို့သည် မျက်နှာချင်းဆိုင် အိမ်ဘက်ဆီသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့လေ၏။ ကျွန်ုပ်က –
“ကိုမြသောင်းရေ . . . .မကြာခင်မှာ ဟောဟို အိမ်ရှေ့အိမ်မှာ အလှူပွဲတို့၊ မင်္ဂလာပွဲတို့ ဖြစ်လာတော့မှာဗျ၊ မဟုတ်မှလွဲရော အဲဒီအိမ်မှာ အပျိုပေါက်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လှမ်းပြီးမြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီကောင်မလေးရဲ့ မင်္ဂလာကိစ္စတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ . . . .” ဟုပြောလိုက်ရာ ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီး ကိုမြသောင်းက –
“အဲဒါတော့ ဗေဒင်ဆရာလွဲပြီထင်တယ်၊ အဲဒီကောင်မလေးက တော်တော်ငယ်ပါသေးတယ်။ အခုမှ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတာဗျ . . . . ပြီးတော့ သူ့မိဘတွေကလည်း အအုပ်အထိန်း ကောင်းကြတယ်။ ကောင်မလေးမှာ ရည်းစားသနာရှိတယ်လို့လည်း အသံမကြားမိပေါင်ဗျာ . . . ” ဟု ကွမ်းကို မြုံ့ရင်းပြုံးစစဖြင့် ပြောလေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကလည်း-
“အေးဗျာ . . . ကျုပ်ကလည်း ကျုပ်ရဲ့ပညာအရ ပြောစရာရှိတာ ပြောရတာပါ။ ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာမလာကတော့ ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာ စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲပေါ့ဗျာ . . .” ဟုပြန်၍ ပြောလိုက်ရလေ၏။
ထို့နောက်တွင်ကား ကျွန်ုပ်သည် မိတ်ဆွေကြီး ကိုမြသောင်း၏ အိမ်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှာကြားစရာရှိသည်များကို မှာကြားပြီးနောက် ပြန်လာခဲ့လေတော့၏။
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပွားပြီး (၃)ပတ်နီးပါးခန့် ကြာသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကြီး ကိုမြသောင်းသည် နံနက်စောစောစီးစီး ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရောက်ရှိလာလေ၏။
ပြီးနောက် နှစ်ဦးသားသည် လမ်းထိပ်ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ သွား၍ လက်ဖက်ရည် သောက်ကြလေ၏။ ထိုသို့ လက်ဖက်ရည်သောက်ကြရင်း မိတ်ဆွေကြီး ကိုမြသောင်းက –
“ဗေဒင်ဆရာကိုတော့ တောင်းပန်စကား ဆိုရဦးမယ်ဗျို့ . . .ခင်ဗျာပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ အိမ်ရှေ့အိမ်က ကောင်မလေး ယောကျာ်းနောက် လိုက်ပြေးလို့ ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်။ အခုတော့ . . . နှစ်ဖက်မိဘတွေ ညှိနှိုင်းပြီး ပြေပြေလည်လည်နဲ့ မကြာခင် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမတဲ့ဗျို့ . . . . . ၊ ကျုပ်ကိုလည်း ရပ်မိရပ်ဖဆိုပြီး တိုင်ပင်ကြလို့ ကျုပ်လည်း သိခွင့်ရတာ . . . ” ဟုပြောလေတော့ရာ ကျွန်ုပ်လည်း လက်ဖက်ရည်ကို တစ်ကျိုက်မျှ မော့လိုက်ပြီးနောက် ပြုံးနေလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ မိတ်ဆွေကြီး ကိုမြသောင်းက –
“နေစမ်းပါဦးဗျ . . . ခင်ဗျားတို့ပညာက အတော်ဟုတ်တာပဲ၊ သူတို့ ကိန်းခန်းတွေကိုလည်း မတွက်မချက်ပဲနဲ့ ဘယ်လိုများ သိနေတာလဲဗျာ၊ အကြားအမြင်များရလေရော့သလား . . . . ” ဟုသိလိုဇောဖြင့် မေးလေတော့၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က –
“ဒီလိုပါဗျာ . . . . ကျုပ်တို့ဆရာကြီး ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ ပညာခန်းလေးတစ်ခုပါ၊ ကိုယ့်ရှေ့က အိမ်တွေ၊ အဆောက်အဦးတွေမှာ ဆေးသုတ်တဲ့နိမိတ် ကြုံရင် ကိုယ်ဆီမှာ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲ၊ ပွဲလမ်းသဘင်လာပြီး ကြုံတတ်တယ်ဗျို့ . . .။
အဲဒီတော့ . . . ခင်ဗျား အိမ်မှာက ဆေးတွေသုတ်နေလေတော့ ဟိုဘက်အိမ်မှာတော့ မကြာခင် ပွဲလမ်းသဘင် ကြုံတော့မှာပဲလို့ နိမိတ်ပတ်လိုက်တာပါဗျာ . . . ” ဟုပြန်၍ ပြောလိုက်ရာ မိတ်ဆွေကြီး ကိုမြသောင်းလည်း ခေါင်းကိုတွင်တွင် ညိတ်ရင်း –
“သြော် . . . . သူ့ပညာနဲ့ သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲနော် . . .” ဟု ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ရေရွတ်နေပါလေတော့သတည်း . . . .။
တဈနသေ့၌ ကြှနျုပျသညျ မိတျဆှတေဈဦး၏ အိမျသဈတကျပှဲသို့ ရောကျရှိသှားခဲ့လေ၏။
ထိုမိတျဆှမှော အိမျသဈတကျပှဲကိုသာ ပွုလုပျသျောငွား ၎င်းငျး၏ အိမျမှာ မှမျးမံပွငျဆငျဖှယျရှိသညျ အားလုံးကို အပွီး မသတျရသေးသောကွောငျ့ လကျသမားအခြို့၊ ပနျးရနျဆရာအခြို့၊ ဆေးသုတျသမားအခြို့မှာလညျး အလုပျဝငျနဆေဲ ဖွဈသညျကို တှရေ့လေ၏။
ကြှနျုပျနှငျ့ ကြှနျုပျ၏ မိတျဆှေ ဖွဈသူတို့သညျ ၎င်းငျး၏ အိမျရှရှေိ့ ခုံတနျးကလေးပျေါတှငျ ထိုငျရငျးရောကျတတျရာရာ – စကားမြားကို ပွောဆိုနခေဲ့ကွလေ၏။ ထိုသို့ ပွောဆိုကွရငျး ကြှနျုပျ၏ မကျြလုံးအစုံတို့သညျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ အိမျဘကျဆီသို့ ရောကျရှိသှားခဲ့လေ၏။ ကြှနျုပျက –
“ကိုမွသောငျးရေ . . . .မကွာခငျမှာ ဟောဟို အိမျရှအေိ့မျမှာ အလှူပှဲတို့၊ မင်ျဂလာပှဲတို့ ဖွဈလာတော့မှာဗြ၊ မဟုတျမှလှဲရော အဲဒီအိမျမှာ အပြိုပေါကျအရှယျ ကောငျမလေးတဈယောကျကို လှမျးပွီးမွငျလိုကျတယျ။ အဲဒီကောငျမလေးရဲ့ မင်ျဂလာကိစ်စတောငျ ဖွဈနိုငျတယျဗြ . . . .” ဟုပွောလိုကျရာ ကြှနျုပျ၏ မိတျဆှကွေီး ကိုမွသောငျးက –
“အဲဒါတော့ ဗဒေငျဆရာလှဲပွီထငျတယျ၊ အဲဒီကောငျမလေးက တျောတျောငယျပါသေးတယျ။ အခုမှ ဆယျတနျးအောငျပွီးတာဗြ . . . . ပွီးတော့ သူ့မိဘတှကေလညျး အအုပျအထိနျး ကောငျးကွတယျ။ ကောငျမလေးမှာ ရညျးစားသနာရှိတယျလို့လညျး အသံမကွားမိပေါငျဗြာ . . . ” ဟု ကှမျးကို မွုံ့ရငျးပွုံးစစဖွငျ့ ပွောလေ၏။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနျုပျကလညျး-
“အေးဗြာ . . . ကြုပျကလညျး ကြုပျရဲ့ပညာအရ ပွောစရာရှိတာ ပွောရတာပါ။ ကြုပျပွောတဲ့အတိုငျး ဖွဈလာမလာကတော့ ငှရေောငျပိတျကားပျေါမှာ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ပဲပေါ့ဗြာ . . .” ဟုပွနျ၍ ပွောလိုကျရလေ၏။
ထို့နောကျတှငျကား ကြှနျုပျသညျ မိတျဆှကွေီး ကိုမွသောငျး၏ အိမျသဈနှငျ့ ပတျသကျ၍ မှာကွားစရာရှိသညျမြားကို မှာကွားပွီးနောကျ ပွနျလာခဲ့လတေော့၏။
အထကျပါ အဖွဈအပကျြမြား ဖွဈပှားပွီး (၃)ပတျနီးပါးခနျ့ ကွာသောအခါတှငျ ကြှနျုပျ၏ မိတျဆှကွေီး ကိုမွသောငျးသညျ နံနကျစောစောစီးစီး ကြှနျုပျထံသို့ ရောကျရှိလာလေ၏။
ပွီးနောကျ နှဈဦးသားသညျ လမျးထိပျရှိ လကျဖကျရညျဆိုငျသို့ သှား၍ လကျဖကျရညျ သောကျကွလေ၏။ ထိုသို့ လကျဖကျရညျသောကျကွရငျး မိတျဆှကွေီး ကိုမွသောငျးက –
“ဗဒေငျဆရာကိုတော့ တောငျးပနျစကား ဆိုရဦးမယျဗြို့ . . .ခငျဗြာပွောခဲ့တဲ့ အတိုငျးပဲ အိမျရှအေိ့မျက ကောငျမလေး ယောကျြားနောကျ လိုကျပွေးလို့ ပွဿနာတှဖွေဈကွတယျ။ အခုတော့ . . . နှဈဖကျမိဘတှေ ညှိနှိုငျးပွီး ပွပွေလေညျလညျနဲ့ မကွာခငျ မင်ျဂလာပှဲကငျြးပမတဲ့ဗြို့ . . . . . ၊ ကြုပျကိုလညျး ရပျမိရပျဖဆိုပွီး တိုငျပငျကွလို့ ကြုပျလညျး သိခှငျ့ရတာ . . . ” ဟုပွောလတေော့ရာ ကြှနျုပျလညျး လကျဖကျရညျကို တဈကြိုကျမြှ မော့လိုကျပွီးနောကျ ပွုံးနလေိုကျလေ၏။ ထိုအခါ မိတျဆှကွေီး ကိုမွသောငျးက –
“နစေမျးပါဦးဗြ . . . ခငျဗြားတို့ပညာက အတျောဟုတျတာပဲ၊ သူတို့ ကိနျးခနျးတှကေိုလညျး မတှကျမခကျြပဲနဲ့ ဘယျလိုမြား သိနတောလဲဗြာ၊ အကွားအမွငျမြားရလရေော့သလား . . . . ” ဟုသိလိုဇောဖွငျ့ မေးလတေော့၏။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနျုပျက –
“ဒီလိုပါဗြာ . . . . ကြုပျတို့ဆရာကွီး ပွောပွခဲ့ဖူးတဲ့ ပညာခနျးလေးတဈခုပါ၊ ကိုယျ့ရှကေ့ အိမျတှေ၊ အဆောကျအဦးတှမှော ဆေးသုတျတဲ့နိမိတျ ကွုံရငျ ကိုယျဆီမှာ အလှူပှဲ၊ မင်ျဂလာပှဲ၊ ပှဲလမျးသဘငျလာပွီး ကွုံတတျတယျဗြို့ . . .။
အဲဒီတော့ . . . ခငျဗြား အိမျမှာက ဆေးတှသေုတျနလေတေော့ ဟိုဘကျအိမျမှာတော့ မကွာခငျ ပှဲလမျးသဘငျ ကွုံတော့မှာပဲလို့ နိမိတျပတျလိုကျတာပါဗြာ . . . ” ဟုပွနျ၍ ပွောလိုကျရာ မိတျဆှကွေီး ကိုမွသောငျးလညျး ခေါငျးကိုတှငျတှငျ ညိတျရငျး –
“သွျော . . . . သူ့ပညာနဲ့ သူတော့ ဟုတျနတောပဲနျော . . .” ဟု ကကြေနြေပျနပျကွီး ရရှေတျနပေါလတေော့သတညျး . . . .။
မွနျမာ၊ ရနျကုနျ၊ မတျလ ၄ရကျ၊ ၂၀၂၀ခုနှဈတှငျ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မှ ဦးစီးကငျြးပမည့…
WILL YOU MARRY ME ? Wedding Promotion Week At Chatrium Hotel Royal Lake Yangon 10th to 16th February…
ယနေ့ အောကျတိုဘာလ ၃၀ ရကျနတှေ့ငျ ကံစမျးမဲဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို မီလီယာ ရနျကုနျ၏ Garbo Bar တှငျကငျြးပပွုလ…